Solovolo - Recette de cuisine malagasy de Madagascar
par Tatiana Razanadraibe	 10 décembre 2018 Écrire un commentaire
Ito indray misy fomba hafa azo atao rehefa manana katsaka mba hampiovahova ny gouté ao antokan-trano: solovolo na mofokatsaka.
Fotoana hiketrehana azy: 1h 30mn
Fomba fikarakarana Solovolo na mofokatsaka
Alaina ny katsaka maintso dia esorina hiala ny raviny.
Kikisana tsara ao anaty sivana ilay vaoniny mbola maintso hiala amin’ny tonony.
Alaina ny laona dia totona miaraka amin’ny akondro mba halemy tsara.
Arotsaka ao avy hatrany ny siramamy mba hamamy azy.
Velarina miaraka amin’izay avy eo ny ravin’ilay katsaka mbola maintso.
Rehefa voavelatra tsara ilay ravina dia araraka tsikelikely amin’ny sotro ilay katsaka efa voatoto.
Fonosina tsara ireo avy eo mba tsy hivaha ilay fonosana rehefa mahandro azy.
Arotsaka ao anaty vilany dia tsara raha asiana tsikalana ilay vilany mandrapahamasaka azy.
Aroso mafana no tena mahatsara azy dia ampiarahana amin’ny dite kely.
Rehefa makany Ambatomirahavavy dia solovolo no fiantso azy io. Ilay katsaka maitso no asiana akondro sy siramamy dia atao feta; fonosina dia atao bain marie dia vita.
Rehefa mikiky katsaka amin’ny sivana dia tandremana mba tsy anaraka ny hodi-manify mba ho malefaka tsara ilay feta azo.
katsaka sy solovolo amidy eo Ambatomirahavavy
gateau de mais, koba, koba katsaka, koba katsaka sy akondro, mofokatsaka
Article précédent : Macaroni aux sardines
Petits pains à hamburgers na buns burgerArticle suivant :